भारतमा कोरोना भयावह, तर गाउँमा त्रास छैन! « Media for all across the globe
भारतमा कोरोना भयावह, तर गाउँमा त्रास छैन!
भारत कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर जस्तै बनेको छ। दिनानुदिन अपडेट हुने संक्रमणदर र मृत्युदर हेर्दा अवस्था भयावह छ। नागरिकहरु जारी लामो बन्दाबन्दीका कारण हैरानीमा छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार- कोरोना महामारी गाउँ-गाउँसम्म फैलिए पनि त्रास भने शून्य छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु संक्रमणबाट जोगिन न मास्क लगाउँछन्, न त सामाजिक दुरीको अनुसरण नै गर्छन्।
कामरुप (असम) जिल्लाको सानो बजारमा व्यवसायसँग सम्बन्धित २५ जनाको समूह छ। सोही समूहमा काम गर्ने हरमहन देका भन्छिन्- ‘जीवन पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ। मधुमेहको बिरामी छु। भाइरसले मलाई आक्रमण गर्न सक्दैन, यो मेरो रोगभन्दा कमजोर छ।’
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका पत्रकारहरूले भारतका दुई दर्जन बढी साना गाउँ र शहरहरु भ्रमण गरेका छन्। उनीहरुले ती गाउँ/ शहरमा पुग्दा सामूहिक रुपमा मास्क लगाउँने र सामाजिक दूरीको पालना गर्ने मानिसहरुको संख्या कमै देखे।
संक्रमणको संख्या ग्रामीण भेगमा बढेसँगै भारत थप भयावह अवस्था आउँन सक्ने विज्ञहरुले चेतावानी दिएका छन्। महामारीको सामना गर्न भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् टोलीका सदस्य रजनीकान्त भन्छन्- ‘धेरै मानिसहरु महामारीलाई हल्का रुपमा दिइरहेका छन्। ग्रामीणका नागरिकहरु शुद्ध हावा र ताजा तरकारीहरू खाएपछि कोरोना नलाग्ने तर्क गर्छन्। यो बिल्कुनै गलत सोच हो।’
गाउँका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु कमजोर छन्। तरपनि, उनीहरुमा सामाजिक दुरी पालना, मास्क लगाउने र भीडभाडबाट टाढा रहने बानी छैन। भारतीय ग्रामीण इलाकामा कोरोना संक्रमण घुसिरहेको संकेत रोयटर्सको विश्लेषणबाट बुझ्न सकिन्छ। भारतीय केन्द्र सरकारले सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ। तरपनि गाउँका नागरिकमा वास्तै छैन।